तिमी मेरो तन्त्रमन्त्र सरखार (हाँस्य व्यङ्य, यसमै छ मज्जा) • Kalanga News
गृह/प्रदेश समाचार/प्रदेश नं. ७/तिमी मेरो तन्त्रमन्त्र सरखार (हाँस्य व्यङ्य, यसमै छ मज्जा)
तिमी मेरो तन्त्रमन्त्र सरखार (हाँस्य व्यङ्य, यसमै छ मज्जा)
ईश्वरसेन थापा (खप्तडछान्ना–७, बझाङ)
सरकार चलयमान हुन्छ । त्यो हामीले हाम्रो देशको सरकारबाट सिक्यौँ । देशमा समृद्धी र विकास गर्नु प¥यो भनी १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य भयो । अनि सुरु भयो अविधुर शासन यानिकि निर्दल, बहुदल, लोकतन्त्र । घडिको सुईले पड्को मार्दै गयो देशमा आमूल परिवर्तन भयो । देशमा भएका विभिन्न चक्काजाम, आमहड्ताल पछि ०६२÷०६२ मा लोकतन्त्रले नपुगी गणतन्त्र ल्याउनको लागी सुरुभयो भोगमरीतन्त्र जसको फाइदा उठाउदै, धनी लुटतन्त्र मच्चाउँदै झनझन धनी बन्दै गए भने गरिब झन गरिब हुदैँ गए । फाटेको मन सिलाउँदै थिए जनता, १÷२ पटक बल्ल बल्ल हातमुख जोडि आखीरमा गणतन्त्र के रहेछ र हामीले लडाँई कि ग¥यौँ भनी जनताले जान्न खोज्दा त्यो त लोकतन्त्र पछिको भोकमरीतन्त्रबाट पाइएको गणतन्त्रको नाममा घाँडोतन्त्र पो रहेछ जसले हल्ला हल्लामै हजारौँ सपनामा डुबायो हामी युवालाई । आखिर सपना सपनामै रहयो ।
देशमा समृद्धी र विकासका कुरा ल्याएर बढो खुविका साथ परिवर्तन गर्न खाज्ने हाम्रो सरकारका कुरा र सपना मात्रै चिल्ला रहे । परिवर्तन भयो त केवल समय मात्र बाँकि त उहिँ लँगडो घोडा न हो ? अझैँ पनि काम गर्ने सकारी निकायमा हजारौँ संख्यामा दक्ष जनशक्तिको अभाव नै छ । तर पनि हाम्रा सरखारले जनताबाट उठाएको कर असुली विकास हैन जनता माझ हाड हाली कुकुर जुध्याइ झै गरि जनतालाई आपसमा लडाई रकम कुम्ल्याउनेलाई हामी जनताले के भन्ने त सरकार या सरखार ? यो हाम्रो खन्चुवा सरखार नभइ सरकार भै दिएको भएत कर असुली अनुसारको जनतालाई सरासर सरोकारवाला निकायबाट सेवा सुविधा दिन्थ्यो होला र काम गर्न सक्दैनथ्यो भने कर लिन पनि लाज मान्थ्यो होला । तर विडम्बना यसले त जनतालाई सेवा दिनुको नामका विभिन्न बाहानामा कर असुली कंगाल बनाई रहेको छ । आखिरीमा हाम्रो सरखार न प¥यो ।
विचार हामी युवा सपना बुन्दै भत्काउँदैमा ठिक्क छौँ । वर्षेनि हजारौैँ युवा जनशक्ति बेरोजगार भएकोमा सरखारलाई कुनै चिन्ता छैन ? युवा खाडि र विदेश गएर रेमिटान्सले देश चले भैगोनी । कहिले क्रमचारी समायोजन, कहिले प्रधानमन्त्री रोजगार त कहिले फाट्र ट्राक भनी युवालाई जेलझाल गरिरहेको छ विज्ञापनमा पनि । हाम्रा सरखारले विज्ञापनको बाहना बनाइरहेको टुलुटुलु हेरिरहेका छौँ हामी युवा यदि विज्ञापन भैहाल्य पनि त्यसमा भएसम्म रिलेटिभ इज फ्रट भनि लागि परेका हुन्छन् हाम्रा नेता । पदका लागि रात दिन घुडाँमुडा धसि , घोगन्लेजेसन र रटन्तेजेसनको सुत्रबाट आफ्नो मति बिगारी निजामती सेवा प्रवेश गर्ने हामी युवाको दिमाग कसरी सहज हुन सक्छ र ? अनि हामीलाई चलाउने हाम्रो नेता, जसले राणा शासन पछि अविधुर शासन सम्म देशमा समृद्धी र विकास भनी जनतालाई ललाई फूल्याई कुर्सी तानातान गरिरहेका छन् । अब भन्नुहोस् देशमा मति भ्रष्ट भएको भ्रष्ट निजामति र २००७ साल देखी चिल्ला कुरा गर्ने नेताले कसरी देश विकास गर्ला ? जोगी मात्र फेरीय हो कुरा त्यही हो, “जति जोगि आए पनि कानै चिर्रेका” नेतालाई हामी जनताले अबता देता देता देता भन्दै आजसम्म ठिक्क भाको छ । हे मेरो सरकार मख्ख छ !